दार्जीलिङमा सुपरहिट बन्दै ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारदार्जीलिङमा सुपरहिट बन्दै ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’
कबड्डी कबड्डी कबड्डी-को कथा नौरीकोट हुँदै यसपाली घान्द्रुक पुगेको छ। त्यहाँ छ गुरुङ बस्ती। त्यहीँ छ प्रेम र धोकाबीच कलाकारहरूले खेलेको कबड्डी कबड्डी कबड्डी।
मैया (रिश्मा गुरुङ)ले छाडेर गएपछि वीरकाजी (दयाहाङ राई) यता न उताको भएर बसेका छन्। काम कुरो गर्दैनन्। बिके (बिजय बराल)-सित बराल्लिबस्छन्। मनमा वियोगको चोट छ। घरमा बिहेबारेको कचकच उत्तिकै छ। वीरकाजीलाई लाग्थ्यो, मैयाप्रतिको आफ्नो प्रेम अजम्बरी छ।
तर सिद्धान्त नै डगमगिने गरी नयाँ सोल्टिनी काशी (उपनासिंह ठकुरी) को अङ्गालो भेटेपछि प्रेमले ठेगाना सार्छ। काशीको आफ्नै प्रेमी (कर्मा) छ। आमा (लुनिभा तुलाधार) आफ्नातर्फको मामाको छोरो धनकाजी (विल्सनविक्रम राई)सित छोरीको बिहे गर्न चाहान्छिन्। बुवा (माओत्से गुरुङ) भने वीरकाजीलाई ज्वाई बनाउन इच्छुक छन् ।
कबड्डी कबड्डी कबड्डीको उनीहरूबीच नै घुमिबस्छ।
काशीले कोसित बिहे गर्छिन् त? के वीरकाजीको मैयासित भेट हुँदैन?
तपाईँलाई सबै कुरा जान्नको लागि त हलतिरै कुद्नुपर्ने हुन्छ। 8 नोभेम्बरदेखि सिक्किम, दार्जीलिङ, कालेबुङ, सिलगढी अथवा उत्तरबङ्गालका हलहरूमा फिल्म लागिसकेको छ। कबड्डी कबड्डी कबड्डीमा पनि ‘डायलग’ नै प्रमुख छ। शुरुभएपछि अन्तसम्मै ‘डायलग’ले नै दर्शकलाई समातेर राख्छ। यताका दर्शकले कबड्डी कबड्डी कबड्डीजस्तो फिल्म हेरेन भने, के फिल्म हेर्ने त?
कबड्डी कबड्डी कबड्डी सबै हलहरूमा बम्पर चलिरहेको छ।
खबरम्यागजिनले केही साहित्यकार, कलाकारहरूलाई कबड्डी कबड्डी कबड्डी कस्तो लाग्यो र यो किन हेर्नु भनेर सोधेको थियो, उनीहरूले यसो भनेका छन्-
सुवास सोताङ, कवि, कालेबुङ
फिल्म मनोरञ्जक छ। अरूले भन्दा नि यताको हामीले यस्तो नेपाली फिल्म किन हेर्नुपर्छ भने धेरै समयपछि यसरी नेपाली फिल्म फेरि हामी छेउछाउका थिएटरहरूमा लाग्न थालेको छ। नत्र युटुबनै कुर्नु पर्थ्यो। नेपाली फिल्म देखाइने परम्परालाई मलजल गर्नकै निम्ति पनि हामीले हाम्रो नेपाली फिल्म हेर्नुपर्छ। नेपाली फिल्मले बोक्ने हाम्रो भाषा, संस्कृति, अभिनय र आफ्नोपनको अलग गुण त साथमा छँदैछ।
खुसेन्द्र राई, कथाकार सिक्किम
अहिले नेपाली समाजमा गृहस्थी जीवनको जुन सङ्कट वा जुन टुक्रिने क्रम चल्दो छ अनि यसले छोराछोरीको मनोविज्ञानमा परेको असर फिल्ममा टड़्कारो रूपमा आएको छ । प्रेमको मनोविज्ञानको अनुभव त सबैको एउटै होला ।
सागर राई, आरजे, दार्जीलिङ
फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो। क्वालिटीको फिल्म। यतिको क्वालिटीको फिल्म सबैले हेरिदिए यहाँका दर्शकलाई नेपाली फिल्मप्रति विश्वास हुन्छ। हाम्रा स्थानीय कलाकारहरूले बनाएको फिल्म पनि हेर्न थाल्छन् भन्ने लागेको छ।
विशाल नाल्बो, कवि, कालेबुङ
यो फिल्मले यसरी छोयो कि फिल्मको केही दृश्य, केही संवाद कहिल्यै भुल्न सक्दिन हुँला। सम्बन्धबारे बुझ्न, प्रेमबारे बुझ्न पनि यो फिल्म हेर्नै पर्छ। फिल्ममा संवाद यति बलियो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा नै थिएन, कबड्डी कबड्डी कबड्डी हेरेर यस्तो लाग्यो, विश्वका राम्रा फिल्महरूमध्ये यो पनि एउटा हो। यतिको फिल्म नहेर्नेले फिल्म नै नहेर्दा हुन्छ। यो सपरहिट नेपाली फिल्म मध्ये एउटा हो।
चलचित्र- कवड्डी कवड्डी कवड्डी
निर्देशक– रामबाबु गुरुङ
कलाकार- दयाहाङ राई, उपसाना सिंह ठकुरी, कर्मा, विजय बराल, माओत्से गुरुङ आदि ।
अवधि- १ घण्टा ५५ मिनेट